-Ndị egwuregwu niile, bịa
2020 na 2021 ga -abụ afọ abụọ pụrụ iche, na Febụwarị 2020 ọrịa ahụ malitere na China, mgbe ahụ, ọrịa zuru ụwa ọnụ ji nwayọọ nwayọọ malite ịgbasa. Ruo taa, ekwenyela ihe karịrị nde 200 n'ụwa niile, ihe karịrị nde mmadụ anọ anwụọkwala. Maka ụwa, nke a siri ike afọ abụọ, onye ọ bụla na -ebi ndụ siri ike. Dị ka ihe omume egwuregwu kacha emetụta n'ụwa, ebigharịrị Egwuregwu Olympic site na 2020 ruo 2021 n'ihi ọrịa ahụ. Ọ mepere na July 23th na Tokyo, Japan, wee mechie na August 8nke.
Egwuregwu Olympic na -ewere egwuregwu na ememme Quadrennial Olympic dị ka ihe ndị bụ isi. Ọ na -akwalite mmepe nke physiology mmadụ, akparamaagwa na akparamagwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na -ekwupụta nghọta n'etiti ndị mba niile, na -ejikọkwa omenala obodo niile. Ọ bụ mmezi udo ụwa. Mmegharị mmekọrịta mba ụwa.
Ntụnyere afọ anọ, n'ámá egwuregwu Olympic, ndị na-eme egwuregwu gosipụtara nsonaazụ afọ anọ nke ịrụsi ọrụ ike. Taa ụlọ ọrụ Jiangxi Aili haziri otu ndị ahịa niile ka ha na -ekiri egwuregwu Olympic na elekere wee mụta sprite egwuregwu ha. na ịkwa iko na -arụ ọrụ nke ọma wee nweta ihe nrite ọla edo, n'ezie mba niile enwetala ezigbo nsonaazụ, dịka America, Japan, Australia, Russia, England na mba ndị ọzọ. , na ndị na -ere ahịa Aili n'ọdịnihu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga -enye ndị mmekọ niile ngwaahịa dị mma yana mgbe ahịa gachara.
ọ bụ ụkpụrụ egwuregwu Olympic “ngwa ngwa, dị elu, sie ike karịa.”
Coubertin kọwara mmụọ Olimpik n'otu oge: Ihe kacha mkpa n'egwuregwu Olympic abụghị imeri kama isonye, ​​dịka ihe kacha mkpa na ndụ abụghị mmeri kama mgba, ihe dị mkpa abụghị inwe mmeri kama. alụọla nke ọma. Atụrụ m anya na a ga -akwụghachi onye na -eme egwuregwu ọ bụla ụgwọ ọrụ, na ndụ ndị mmadụ ga na -akawanye mma, na ụwa anyị ga na -adịwanye n'udo.